गलत एजेण्डा पछ्याउँदै एमाले जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गलत एजेण्डा पछ्याउँदै एमाले
शुक्रबार २७ चैत, २०७१
जनबोली २७ चैत, काठमाडौं । एमाले नेताहरुले भाषण गर्दा वा छलफल बहसमा पनि भन्ने गर्छन्-एमाओवादी जनताको बहुदलीय जनवादकै बाटोमा आइरहेको छ, हिजो गलत भनेका हाम्रा एजेण्डालाई आज उसले आफ्ना बनाएर हामीलाई पछ्याएको छ ।
झट्ट सुन्दा वा हेर्दा हो जस्तो पनि लाग्छ । सत्ता बन्दूकको नालबाट जन्मिन्छ भनेर सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टी अन्ततः एमालेजस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आइपुग्यो । जुन प्रतिस्पर्धा एमालेले ०४७ सालमै स्वीकार गरिसकेको थियो ।
एमालेले ०२८ सालमै बन्दुक उठाएको थियो । एमाओवादीले त्यसको २४ वर्षपछि बन्दूक उठायो । धेरै यस्ता उदाहरण एमाले नेताहरु दिन्छन्, जसबाट एमाले नेताहरु माओवादी ढीलोचाँडो हाम्रो बाटोमै आउछ भन्ने पुष्टि गर्न खोज्छन् ।
वास्तवमा माओवादीले ढीलाचाँडो एमालेका एजेण्डामा आफूलाई उभ्याएको छ वा एमालेले लिएको बाटोमै आइपुगेर अडिएको छ । तर, एमाले आफैं चाहिँ आफ्नो त्यो एजेण्डामा टिक्न वा त्यो बाटोमा हिड्न सक्यो त ? एमालेजनले यो प्रश्नको उत्तर आफैंभित्र नखोज्दा राजनीतिले सही निकास पाउन नसकेको हो ।
१० दिनमै नयाँ जीवन, यसरी सजिलै निको भयो बर्षौ पुरानो जटिल रोग [ भिडियोसहित ]
बागलुङ र सिन्धुपाञ्चोक विपद् सङ्कट क्षेत्र घोषित : अब यसरी ६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिने